Super Mario Run inoenderera ichipaza download download | IPhone nhau
Iyo Super Mario Run chinoshamisa hachirambike. Takatarisana nechitarisiko chekutanga chemapombi anonyanya kuzivikanwa wenguva dzose pane mbozhanhare. Kuonekwa kwayo kwekutanga paIOS kwaita kuti munhu wese apenge kurodha pasi mutambo, zvisinei, zvinoita sekunge izvo vazhinji vaisaziva ndeyekuti vaizofanira kupfuura nemubhokisi kana vachida kugona kutamba ese mazinga e Super Mario Run , iyo yakagadziriswa nezviverengero zvishoma zvakashata muongororo dzeApple App. Kune rimwe divi, kubudirira hakugone kuvanzwa, uye ndizvo Super Mario Run ndiyo yanga iri mutambo uyo wasvika mamirioni makumi maviri neshanu ekurodha pasi pakutanga.
Musi waZvita 15, akaisa hwaro, ivo vanoongorora Sensor Tower akagumisa kuti Super Mario Run yakasvika Kutora mamirioni 25 mumazuva mana chete, kubudirira kwakatora Pokémon Go hapana asingasviki mazuva gumi nerimwe, nepo imwe yakarova seClash Royal yaifanira kumirira mazuva gumi nemaviri kuti isvike kune yakafanana nhamba. Dambudziko zvakadaro, nderekuti vazhinji veavo vashandisi vakairodha pasi havasi kufunga kupfuura nebhokisi kuti vabhadhare mutambo uzere.
Ivo havana chekuita nehunhu hwemutambo, ivo vanotaura kubva Reuters, asi nekuda kwekuti iwo musika uzere nemahara-kutamba-mitambo isingamanikidze mushandisi kushandisa 10 euros. Ichokwadi ndechekuti isu tiri mumutambo nemutengo unorambidza, hatisi kutaura nezve € 1,99 kana kunyangwe € 3,99, iyo ye-in-app kutenga inodhura inosvika ku € 9,99, inogona kuva chipingamupinyi chavasiri kuda kukunda.
Nenzira yekufunga, mutambo unonakidza, muActualidad iPhone isu takaedza zvakaoma, asi pasina kupokana, zvinoita kunge isiri mutambo uyo unofanirwa kubhadhara kupfuura € 3,99, kunyangwe nekutenderwa kwaNintendo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Super Mario Run inoenderera ichiputsa zvinyorwa zvekurodha pasi